तपाइकाे सुत्ने तरीका कतै गलत त छैन ? जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
दायाँ र वायाँः तपाईं साईड फर्किएर सुत्नु हुन्छ भने ढाडमा त्यति चोट पर्दैन । वाँया फर्केर सुत्दा मुटुको जलनलाई घटाउँछ । तसर्थ यो पोजिसनमा सुत्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तर, दाँया फर्केर सुत्दा भने मुटुको जलन बढाउँछ । जर्नल अफ क्लिनिकल ग्यास्ट्रोनेस्ट्रोलोजीको अध्ययन अनुसार स्वस्थ वयस्कलाई धेरै चिल्लोयुक्त खानेकुरा खान लगाई एकातिरमात्र फर्किएर सुत्न लगाइएको थियो । दायाँ फर्केर सुत्ने वयस्कहरुको शरिरमा एसिडको मात्रा उच्च देखिएको थियो । अमेरिकन जर्नल अफ ग्यास्टोनेट्रोलोजीको अध्ययनमा पनि यस्तै निस्कर्ष देखिएको थियो । गर्भवती महिला पनि देब्रे फर्किएर सुत्दा रगतको प्रवाह निकै राम्रो हुन्छ ।
सुताईको पोजिसनले पनि पार्टनरसँगको सम्बन्धलाई संकेत गर्छ । केही पोजिसन ९आसन० र
तिनिहरुको सम्बन्धमा प्रभाव
Don't Miss it आत्मविश्वास बढाउन शिव खेडाले दिएका यी सजिला सुत्रहरु
Up Next के तपाईकाे कान काेट्याउने बानी छ ? सावधान ! यस्ताे समस्या आउन सक्छ
यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ भने रोकथामका लागी अपनाउनुहोस् यी सजिलो उपायहरू